Madaxwaynihii Hirshabelle oo sheegay in Maxkamadda Sare uu u dacwoon doonno | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Madaxwaynihii Hirshabelle oo sheegay in Maxkamadda Sare uu u dacwoon doonno
Madaxwaynihii Hirshabelle oo sheegay in Maxkamadda Sare uu u dacwoon doonno
Cali Cabdulaahi Cosoble madaxwaynihii xilka laga qaaday ee maamulka Hirshabelle ayaa diiday go’aan kasoo baxay Xukuumadda Soomaaliya oo lagu taageeray xil ka qaadista ay Ku sameeyeen xildhibaanada Hirshabelle.
Cosoble, ayaa sheegay inuusan xafiiska banayn doonin islamarkaana Jowhar sharci Ku tagay sharci oo kali ah uu kaga tagayo xilka Sare ee Hirshabelle.
“Aniga Sharci ayaan Ku imid Hirshabelle, ee xoog kuma qabsan mana laga yaabo inaan xoog iyo qasab Ku baxo” Cosoble, ayaa sidaa sheegay ka dib warkii maanta ka soo baxay golaha wasiirada ee Xukuumadda Soomaaliya.
Waxaa uu sharci daro iyo raqiis Ku tilmaamay war qoraal ahaa oo golaha wasiirada ay Ku ayideen in isaga xilka looga qaaday, isaga oo tilmaamay inuu yahay madaxwaynaha sharciga ah ee Hirshabelle.
“24 saac in mooshin lagu keeno laguna qaado xilna loogaga qaado Madaxweyne maqan ma ahan mid sharci ah,”ayuu Cosoble yiri xili uu la hadlayay VOA laanteeda afka Soomaaliga.
Waxaa uu sheegay in fal-dambiyeedyo laga galay islamarkaana maxkamadda Sare uu u dacwaan doono halkaasi oo uu sheegaya in ay tahay halka ay Ku kala bixi donaan dowladda iyo Isaga.
Waxaa wararku ay sheegayaan in Mr. Cosoble oo shalay soo gaaray Muqdisho ay xalay kulmeen isaga iyo madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo, kaasi oo haatan safar labo maalmood ah kaga maqan dalka.
Si rasmi ah looma oga waxyaabaha madaxwayne Farmaajo uu u sheegay Madaxwaynaha xilka laga qaaday ee Hirshabelle Cali Cabdullahi Cosoble.
Kulankaasi ka dib golaha wasiirada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa shir ay maanta oo Axad ah ay Ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ayideen go’aankii Baarlamaanka maamulka Hirshabelle ay xilka uga qaadeen Cali Cabdullahi Cosoble.
Previous articleMadaxwaynayaasha Soomaaliya iyo Masar oo ka wada hadlay arrimaha Dhaqaalaha iyo Waxbarashada (Sawiro)
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Qaahira kula kulmay Cabdi Qaasim Salaad iyo Jaaliyadda Masar